Inkathi yokwakha kabusha hhayi kuphela kwaletha izinguquko ezinkulu kule umnotho kanye nezombusazwe kweSoviet Union, kodwa futhi ithuba lokuba abaculi abasha ngesikhathi ukuzibonakalisa njengoba elikhanyayo, ngezinye izikhathi ngisho abadlali impikiswano kakhulu. Enye yalezi abaculi wayengubani futhi ungubani kuze kube yilolu suku Bogdan Titomir, ogama biography kuzoxoxwa ngakho ngokuningiliziwe kulesi sihloko. impumelelo yakhe eyinhloko kanye neqhaza ekuthuthukiseni show ibhizinisi wasemakhishini futhi kuzoxoxwa.
Imininingwane emfushane umlandvomufi
Mashi 16, 1967 ku Odessa wazalwa Bogdan Titomir. Biography Man ugcwele eziningi yokuwela. Ikakhulukazi, nomkhaya wakhe bathuthela Severodonetsk, futhi kamuva e Kharkiv futhi Sumy. Abazali izinkanyezi ikusasa yesehlakalo ohlukanisile ngesizathu banal emindenini eminingi - inhloko umndeni kakhulu utshwala abahlukunyezwayo. Lapho esemncane le nsizwa wafunda umculo - ukudlala upiyano, ngisho ufuna ukuba umfundi ngesikhathi somculo umculo. Nokho, ayemiselwe zidlule eziningana indlela ehlukile yokuphila.
Propensity ngoba embi
Bogdan Titomir, ogama biography ugcwele ezihlukahlukene ukuziphatha angajwayelekile, kakade zisencane walithanda ukwethusa abantu. Ngokwesibonelo, e junior esikoleni esiphakeme, ayenobudlelwane, futhi kakhulu ufisa ekuyigxiliseni. Futhi konke lokhu kubonakala imininingwane. Lokho kuphela yokuthi Bogdan kakhulu owenqaba ukugqoka isikole iyunifomu umbala onsundu. Abazali waya kuye athambise isandla, futhi uthenge ke ukuma blue, kodwa wayegqoke ke kakhulu kuyaqabukela. Ngokuvamile umfundi ishicilelwe kuphela isudi jini, okuyinto ngenkathi 1980 kwaba rarity futhi kube inkomba yokuthi isimo esithile. Kodwa lokhu akamanga lapho: jini ngubo wayegqoke ngokukhethekile turvy lebula ubonakala ngokucacile, okubonisa iqiniso lokuthi izingubo ayihlelwa ikuphi, kodwa e-America.
Ngemva kwesikole, waba umfundi Titomir Gnesinka, kodwa ngemva kwezinyanga eziyisithupha waya sebuthweni. Ngemva ukudluliswa kuze kufike endaweni ebekelwe lale nsizwa waba arranger, ukusebenza kule studio ngesikhathi band ethandwa ngokuthi "Ububele Meyi".
Ukudala iqembu "Kar-Man"
Bogdan Titomir, ogama Umlando womuntu ophilako 90 nentshisekelo lenqwaba abalandeli bakhe - omunye wabasunguli be-iqembu lomculo, ogama lakhe uhumusha esiNgisi anjengelithi "indoda-umshini". Ekuqaleni, le phrojekthi uJesu wazalwa duo exotic ethandwa. Emongweni leli qembu Titomir no-Sergey Lemokh. La madoda kukhona ngesikhathi kwakungamadodana abaculi enza kanye uVladimir Maltsev.
"Kar-Man" yazuza ngokushesha udumo ngendlela yokusangana. Abaculi babe real izintandokazi kazwelonke futhi bemagange ukuqhubeka asebenze isitayela kinoputeshestvennikov Club, lokho kungase kubonise igama albhamu yabo yokuqala, "Emhlabeni Wonke". eyaziwa futhi manje izingoma zalotshwa kuleli rekhodi, "Paris, Paris", "CIO-CIO-San", "London, Sala kahle."
Kakade kokuba abadumile, abaculi ngikudalile nangenye albhamu - "Kar-mania". Kodwa-ke izindlela zabo diverged ngokuphelele, futhi ngo-1991 duo behlukana. Lemokh wahlala eqenjini, kuyilapho Bohdan wazinikela ngokuphelele ukuba umsebenzi wakhe solo.
Njengoba kuthiwa lokuxhaphaza ngokocansi, imizamo ngezinye izikhathi Clumsy ukuyichazela imibhalo ayeshiwo by ukudalwa yimpumelelo - lokhu kuyiso sonke isibopho Wama Bogdan Titomir. Biography of umculi uthi uye ngisho iye yadingidwa Embikweni ohlukile ohlonishwa CNN isiteshi emhlabeni ne-TV Parfenov owaziwa wenza iphrojekthi documentary osihloko sithi "Portrait ngemuva," lapho umculi elabizwa ngokuthi umuntu uwukwenziwa samuntu kwenkathi yeminyaka yawo-1990. By endleleni, ngale ukudluliswa umculi Flamboyant wathi ibinzana catch "Abantu hawala", ngaleyo ndlela ebonisa ukuthi abantu lingama ukulalela ongaphakeme ejwayelekile umculo.
Ngokusho Bogdan yena Titomir, biography - imfihlo siqu ngezinga elithile. Yingakho umlingisi akuyona zasizakala kakhulu baphawule amaqiniso athile zokuphila kwakhe. Ngakho, uyini wona lo mkhuba wakhe izidakamizwa, okuyinto "wahlala" ngenkathi kwayo nje omkhulu.
Nokho, esikhathini esiyiminyaka emithathu, kusukela ngo-1992 ngu-1995 lapho ecula, umculi uye waloba albhamu amathathu, elinye lawo liphawuleka enenqubekela phambili futhi techno Umhlahlandlela wesitayela yayo.
Ingxenye 1990 yesibili kwaphawulwa zomculo Olympus Russian pop ukungabi Bogdan Titomir. Biography empilweni yakho, kuze kube isikhathi eside esefikile kubo bonke ukubona, kwenzakala kube imfihlakalo.
Kwabe sekuvela ukuthi kamuva, umculi e-United States of America. Wabe sabika ukuthi wakwenza ukuze bathuthukise amakhono abo siqu. Wayephila ekudingisweni iminyaka eminingi, ngakwazi ukuthola imvume yokuba yisakhamuzi, kodwa ekugcineni namanje wabuyela emuva Russia.
Namuhla, i-Titomir uhlamvu U-Ernesto Che Guevara. Ngesikhathi umlingisi efanayo uye buboshelwe izidakamizwa waqala ahole indlela yokuphila enempilo kakhulu. Wabuye uthi Uhlale ekulungele ukusiza bonke abafuna ukuqeda yizidakamizwa ngesisekelo isipiliyoni sabo ezibabayo.
Ngo kowezi-2000, kuye lo oculayo yaphenduka DJ, ukukhuluma njalo console at amakhonsathi ahlukahlukene.
Ngo-2007, Bogdan Titomir, biography nomndeni ngokuvamile izihloko ingxoxo yomphakathi, privselyudno umemezele ukuthi uye wanquma ukubuyela esigabeni. Futhi cishe ngokushesha ukhiphe i-video entsha ebizwa nge "Yenza njengoba ngenza!". Ngemva konyaka, waba umculi ehola zohlelo "Star striptease", okuyinto wahola kanye socialite ezithile Masha Malinovskaya.
Ngo-2008, Bogdan wenza isiqeshana zokucula zabo "Bix" okuyinto inkanyezi enhle Sofia Rudyeva, won ngonyaka Zonke-Russian ubuhle umncintiswano.
Ngo-2009, umdwebi kudedelwa enye ividiyo. Lesi sikhathi ingoma wabizwa ngokuthi "Inkinga". By the way, ngawo lowo nyaka esihlonishwayo ukuphrinta shicilelo "Forbes" Kulinganiselwa nesimo umculi ngobukhulu lisuka ezigidini ezingu-6 kuya kwezingu-10 US dollars.
Ngo-2011, umdwebi kudale albhamu ngokuthi "pepper kubaluleke kakhulu", okuyinto kwaba iphrojekthi ahlangene umculi nesiteshi ithelevishini "Pepper".
Amaqiniso kusuka nokuphila kwangasese
Kuyini ekuphileni kwakho siqu Bogdan Titomir? Biography, umkakhe, izimpumelelo umculi sika - ke njalo ngokuzuzisayo izintatheli kanye nomphakathi. Ngesikhathi esifanayo, umculi, kungakhathaliseki ukuthi ungakanani yakhe ayisekho abasha, futhi akazange adale emikhaya yabo. Ngokusho yokuvuma wakubo akakholelwa lomshado futhi nje reveling ngenkululeko yayo kunoma ikuphi ukubophezeleka siqu. Kuyinto ngokuvamile kungenzeka ukuhlangana ubuhle ahlukahlukene.
Kodwa ekuqaleni kowezi-2000, umlingisi usengakathelwa sanikela ngeminyaka emihlanu zokuphila kwakhe owesifazane kuphela. Ngesikhathi esifanayo yena kangaka uyakuthanda wakhe ukuthi bafuna ngisho kusukela nezingane zakhe. Nokho, lapho inkosikazi ikhulelwe, unina wathatha wakhe ngokoqobo ukuphoqelela kusukela umculi futhi baphoqwa ukuba asikhiphe isisu. Njengoba umculi ithi kwakungenxa kwesikhathi kabi kangaka kakade nzima.
Ngo-2008, Bogdan ngokuthi Anna washada nentombi eyabonakala ku "Velvet" iqembu. Ubuhlobo ngazimbili kwakubangelwa rapper odumile Russian Thimothewu, okungelinye Titomir. Bogdan Igoshin Union futhi yazihlanganisa kwabaningi ukushaqeka, ngenxa yokuthi, ngokusho abangane intombazane, yena nesizotha esifanele yini kangangokuthi ngaye, naphezu kwezinkinga elalibhekene izingubo eziyengayo, plus yonke into, futhi wabhala isosha esihlatshelelwayo izingoma, futhi ine ingqondo namandla. Ekuqaleni, umshado lihlehliselwe isikhathi esingaziwa isikhathi, futhi abathandi kamuva nabo bonke hlukana.
Philipp Bakhtin: umlandvomufi, imisebenzi kanye amaqiniso athakazelisayo
Odli Harrison: amateur umculi okhokhelwayo
Samvel Avetisyan: Biography nesithombe
Leonid Konovalov - a ngemilingo ngohlamvu capital
Hip ukwa kwasebekhulile: imiphumela ingaba engelapheki
Usezingeni amabhayisikobho engcono sonke isikhathi. Umhlaba Classics Cinema
Lake Austria: isithombe kanye nencazelo
Sizokwenza baqonde ukuthi usuku evundile ezifana
Oatmeal ngesidlo sasekuseni - hhayi kuyisicefe!
Kusukela sizogqokani jacket blue kwabesilisa nabesifazane?
Izinhlobo ingilazi esetshenziswa ezimpilweni zethu
IzAga ngomunye nomunye, noma kanjani ukufundisa ingane imithetho yaleli ubungani?
Indlela ukupheka risotto imifino ngezindlela ezimbili?